Jenesis 30 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
30 Mgbe Rechel hụrụ na ya amụtaghịrị Jekọb nwa ọ bụla, Rechel malitere ikwoso nwanne ya nwaanyị ekworo, o wee malite ịsị Jekọb:+ “Nye m nwa, ma ọ́ bụghị ya, m ga-aghọ nwaanyị nwụrụ anwụ.”+ 2 Jekọb wee weso Rechel iwe dị ọkụ, o wee sị:+ “Àbụ m Chineke, onye jụrụ inye gị mkpụrụ nke afọ?”+ 3 O wee sị: “Lekwa ohu m nwaanyị bụ́ Bilha.+ Gị na ya nwee mmekọahụ, ka ọ mụọ nwa n’ikpere m, ka m nweta ụmụ site n’aka ya.”+ 4 O wee kpọnye ya Bilha bụ́ nwaanyị na-ejere ya ozi ka ọ bụrụ nwunye ya, ya na Jekọb wee nwee mmekọahụ.+ 5 Bilha wee tụrụ ime, ka oge na-agakwa, ọ mụụrụ Jekọb nwa nwoke.+ 6 Rechel wee sị: “Chineke ekpepụtawo m,+ o gewokwa ntị n’olu m, nke mere na o nyere m nwa nwoke.” Ọ bụ ya mere o ji gụọ ya Dan.+ 7 Bilha, nwaanyị na-ejere Rechel ozi, tụụrụ ime ọzọ, ka oge na-agakwa, ọ mụụrụ Jekọb nwa nke abụọ. 8 Rechel wee sị: “Mụ na nwanne m nwaanyị agbawo mgba tara akpụ. Emeriwokwa m ya!” O wee gụọ ya Naftalaị.+ 9 Mgbe Lia hụrụ na ya akwụsịwo ịmụ nwa, ọ kpọọrọ Zilpa bụ́ nwaanyị na-ejere ya ozi kpọnye Jekọb ka ọ bụrụ nwunye ya.+ 10 Ka oge na-aga, Zilpa bụ́ nwaanyị na-ejere Lia ozi mụụrụ Jekọb nwa nwoke. 11 Lia wee sị: “Ị̀ hụkwara ihe ndabara ọma?” O wee gụọ ya Gad.+ 12 E mesịa, Zilpa bụ́ nwaanyị na-ejere Lia ozi mụụrụ Jekọb nwa nke abụọ. 13 Lia wee sị: “Lee otú obi si dị m ụtọ! N’ihi na ụmụ nwaanyị ga-akpọ m onye obi ụtọ.”+ O wee gụọ ya Asha.+ 14 Ruben+ wee na-akpagharị n’oge a na-ewe ọka wit n’ubi+ wee hụ mkpụrụ mandrek n’ọhịa. O wee chịtara ha Lia nne ya. Rechel wee sị Lia: “Biko, nye m ụfọdụ n’ime mkpụrụ mandrek nwa gị.” 15 O wee sị ya: “Ọ̀ bụ obere ihe na ị narawo m di m,+ gị anọrọkwa n’elu ya ugbu a na-anara m mkpụrụ mandrek nwa m?” Rechel wee sị: “N’ihi nke ahụ, gị na ya ga-edina n’abalị a iji gbanwere mkpụrụ mandrek nwa gị.” 16 Mgbe Jekọb si n’ọhịa na-alọta ná mgbede,+ Lia pụrụ ịga zute ya wee sị: “Ọ bụ mụ na gị ga-enwe mmekọahụ, n’ihi na ejiriwo m mkpụrụ mandrek nwa m gobie gị.” Ya na ya wee dinaa n’abalị ahụ.+ 17 Chineke wee nụ olu Lia wee za ya, o wee tụrụ ime, ka oge na-agakwa, ọ mụụrụ Jekọb nwa nke ise.+ 18 Lia wee sị: “Chineke enyewo m ụgwọ ọrụ onye e goro ọrụ, n’ihi na akpọnyewo m di m nwaanyị na-ejere m ozi.” O wee gụọ ya Ịsaka.+ 19 Lia wee tụrụ ime ọzọ, ka oge na-agakwa, ọ mụụrụ Jekọb nwa nke isii.+ 20 Lia wee sị: “Chineke enyewo m onyinye dị mma n’ezie. N’ikpeazụ, di m ga-anabata m,+ n’ihi na amụworo m ya ụmụ nwoke isii.”+ O wee gụọ ya Zebulọn.+ 21 E mesịa, ọ mụrụ nwa nwaanyị wee gụọ ya Daịna.+ 22 N’ikpeazụ, Chineke chetara Rechel, Chineke wee nụ olu ya wee za ya site n’imeghe akpa nwa ya.+ 23 O wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke. O wee sị: “Chineke ewepụwo nkọcha m!”+ 24 O wee gụọ ya Josef,+ sị: “Jehova enyela m nwa nwoke ọzọ.” 25 O wee ruo na mgbe Rechel mụsịrị Josef, Jekọb gwara Leban ozugbo, sị: “Hapụ m ka m laa ebe m si bịa, n’obodo m.+ 26 Kpọnye m ndị nwunye m na ụmụ m, ndị ọ bụ n’ihi ha ka m jeere gị ozi, ka m laa; n’ihi na gị onwe gị maara ozi m jeere gị.”+ 27 Leban wee sị ya: “Ugbu a, ọ bụrụ na ihe m masịrị gị,—enwetawo m ihe mgbaàmà na Jehova na-agọzi m n’ihi gị.”+ 28 O kwukwara, sị: “Gwa m ihe ga-abụ ụgwọ ọrụ gị, m ga-enyekwa gị ya.”+ 29 O wee sị ya: “Gị onwe gị maara otú m si jeere gị ozi na otú ìgwè anụ ụlọ gị si mee nke ọma n’aka m;+ 30 na ọ bụ obere ihe ka i nwere tupu mụ abịa, o wee na-amụba ruo mgbe ọ dị ọtụtụ nke ukwuu, n’ihi na Jehova gọziri gị kemgbe m zọbatara ụkwụ n’ebe a.+ Oleekwanụ mgbe m ga-emere ụlọ nke m ihe?”+ 31 O wee sị: “Gịnị ka m ga-enye gị?” Jekọb wee sị: “Enyela m ihe ọ bụla!+ Ọ bụrụ na ị ga-emere m ihe a, m ga-amaliteghachi ịzụ ìgwè anụ ụlọ gị.+ M ga-aga n’ihu ilekọta ha.+ 32 M ga-agagharị n’etiti ìgwè anụ ụlọ gị dum taa. Si n’etiti ha kewapụta atụrụ ọ bụla tụrụ akịka na nke tụrụ àgwà, nakwa ebule ọ bụla na-acha nchara nchara nakwa nne ewu ọ bụla tụrụ àgwà na nke tụrụ akịka. E mesịa, ndị dị otú ahụ ga-abụ ụgwọ ọrụ m.+ 33 Ezi omume m ga-azakwara m ajụjụ n’ụbọchị ọ bụla ị ga-abịa n’ọdịnihu inyocha ụgwọ ọrụ m;+ nne ewu ọ bụla na-atụghị akịka na nke na-atụghị àgwà nakwa ebule ọ bụla na-adịghị acha nchara nchara bụ nke e zuru n’ohi ma ọ bụrụ na ọ dị n’aka m.”+ 34 Leban wee sị: “Nke ahụ dị mma! Ka ọ dị otú i kwuru.”+ 35 O wee kewapụta n’ụbọchị ahụ mkpi ndị nwere akara n’ahụ́ na ndị tụrụ àgwà na nne ewu niile tụrụ akịka na ndị tụrụ àgwà, nakwa ebule ọ bụla tụrụ àgwà ọcha na nke ọ bụla na-acha nchara nchara, ma o nyefere ha n’aka ụmụ ya ndị ikom. 36 E mesịa, o mere ka ebe ga-ewe njem ụbọchị atọ dịrị n’agbata ya na Jekọb, Jekọb wee na-azụ ìgwè anụ ụlọ Leban ndị fọdụrụ. 37 Jekọb wee gbute osisi stọraks+ na osisi almọnd+ na osisi plen+ ndị dị ndụ ma kpechaa ha ka e nwee ebe ndị na-acha ọcha na ha site n’ikpechapụta ebe ndị chara ọcha n’okporo osisi+ ndị ahụ. 38 N’ikpeazụ, o debere okporo osisi ndị ahụ o kpechara ekpecha n’ihu ìgwè anụ ụlọ ahụ, n’ọwa mmiri ha, n’efere anụ ụlọ ndị ahụ ji aṅụ mmiri,+ bụ́ ebe ìgwè anụ ụlọ ahụ na-abịa aṅụ mmiri, ka ha wee gbaa ibe ha n’ihu ha mgbe ha bịara ịṅụ mmiri. 39 Ìgwè anụ ụlọ ahụ wee na-agba ibe ha n’ihu okporo osisi ndị ahụ, ìgwè anụ ụlọ ahụ wee na-amụ ụmụ ndị nwere akara n’ahụ́, ndị tụrụ akịka na ndị tụrụ àgwà.+ 40 Jekọb wee wepụta ebule iche ma chee ìgwè anụ ụlọ ahụ ihu n’ebe ndị ahụ nwere akara n’ahụ́ nọ nakwa n’ebe ndị niile na-acha nchara nchara n’etiti ìgwè anụ ụlọ Leban nọ. O wee debe ìgwè anụ nke ya iche, o debeghị ha n’akụkụ ìgwè anụ ụlọ Leban. 41 Ihe na-eme mgbe niile bụ na mgbe ọ bụla ìgwè anụ ndị gbasiri ike+ chọrọ ịgba ibe ha, Jekọb na-edebe okporo osisi ndị ahụ n’ọwa mmiri ahụ,+ n’ebe ìgwè anụ ụlọ ahụ na-ahụ ha, ka ha wee gbaa ibe ha n’akụkụ okporo osisi ndị ahụ. 42 Ma ọ naghị edebe ha n’ebe ìgwè anụ ụlọ ndị na-agbasighị ike nọ. Ndị na-agbasighị ike wee na-aghọ nke Leban, ma ndị gbasiri ike na-aghọ nke Jekọb.+ 43 Nwoke ahụ wee na-abawanye ụba, o wee nwee ìgwè anụ ụlọ dị ukwuu na ndị inyom na-eje ozi na ndị ikom na-eje ozi na kamel na ịnyịnya ibu.+